Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jarmalka Jebinta Wararka » Dowladda Jarmalka cusub si ay u sharciyeyso marijuana
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • dhaqanka • Entertainment • Jarmalka Jebinta Wararka • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Dawlada Jarmalka cusub waxay sharciyaynaysaa isticmaalka marijuana
Heshiiska dawladda wadaaga ah ee u dhexeeya xisbiyada Sooshal dimuqraadiga ee dalka, Dimuqraadiyiinta Xorta ah iyo Greens waxaa ka mid ah qodobbo lagu ciqaabayo isticmaalka marijuana.
Sida ay sheegayaan wararkii ugu dambeeyay, dowladda cusub ee isbaheysiga Germany Waxay dejin doontaa nidaam 'la xakameeyo qaybinta xashiishadda ee dadka waaweyn' ee 'isticmaalka madadaalada' iyada oo loo marayo dukaamada shatiga leh.
Sida ku cad qoraalka dukumeentiga uu helay Jarmal wararka, heshiiska dawlada wadaaga ah ee u dhexeeya xisbiyada Sooshal dimuqraadiga ee dalka, Dimuqraadiyiinta Xorta ah iyo Greens waxaa ka mid ah qodobbo lagu xakameynayo isticmaalka marijuana.
"Isbahaysigu wuxuu rabaa in uu si adag u xakameeyo alaabta si loo hubiyo tayada iyo 'ilaalinta carruurta aan qaan-gaarin," heshiisku wuxuu leeyahay.
Bixinta sharciyeynta madadaalada cannabis ayaa la siidaayay usbuucii hore si Jarmal warbaahinta laga soo xigtay dhammaan saddexda xisbi. marijuana daawo Waxa uu sharci ku ahaa Midowga Yurub ilaa 2017.
Wareegii ugu dambeeyay ee wada-hadallada saddexda dhinac ee isbaheysiga ayaa lagu qabtay magaalada Berlin. Xisbiga Socialdemokraterna Olaf Scholz ayaa lagu wadaa inuu ku fadhiisto kursiga ra'iisul wasaaraha, isagoo bedelaya hogaamiyihii hore ee Jarmalka Angela Merkel, taasoo aan isku dayin in dib loo doorto.
Xisbiga muxaafidka ah ee Merkel (CDU) iyo xulafada ka socda xisbiga Christian Social Union ee Bavaria (CSU) ayaa muujiyay waxqabad xumo doorashadii guud ee September, halka xisbiga Scholz uu dhaliyay guulo waaweyn. Xisbiga bidix ee Social Democratic Party (SPD) ayaa door biday inuu isbahaysi la yeesho xisbiyada garabka bidix ee Greens iyo Free Democrats (FDP) halkii ay raadin lahaayeen cusub, waxa loogu yeero 'Isbahaysiga Weyn' ee Christian Democrats.